Bixin cusub oo ah AirPods 3 oo u eg AirPods Pro | Waxaan ka socdaa mac
Bixin cusub oo ah AirPods 3 oo u eg AirPods Pro
Farqiga kaliya ee cad ee aan ku aragno qoraalkan cusub ee la daabacay ayaa ah in si ka duwan AirPods Pro aysan ku darin silikoon / caag qeybta taga gudaha dhegta. Hadda waxaan aragnay dhowr eray oo ka mid ah Jiilka XNUMXaad ee AirPods oo waxay umuuqdaan inay lamid yihiin AirPods Pro, uguyaraan waa sidaa.
Dhexe Gizmochina waxay bixisaa sawirro cusub oo ay umuuqato in AirPods-kan 3 ay leeyihiin naqshad runtii la mid ah AirPods Pro laakiin qaybaha silikoon dhamaadka kuma jiraan. Waxaan fahamsanahay in tani ay ugu wacan tahay naqshadeynta bixiyaha laftiisa, laakiin ma cadda sidoo kale.
Naqshadeedu waxay aad ula mid noqon doontaa AirPods Pro
Ka dib markii aan arkay nashqado kala duwan oo sameecadaha dhagaha la ', dillaacyada iyo wax soo celinta la qabtay dhammaantood waxay isku raaceen in sameecadaha dhagaha cusub ay yeelan doonaan naqshaddan oo la mid ah tan hadda jirta ee AirPods Pro ka yimid Apple. Waxa aan la isku raacsanayn ayaa ah inay ugu dambayntii ku dari doonaan silikoonkan qaybta ugu dambaysa mise waxay u sii ahaanayaan sida AirPods-ka hadda aan haysan.
Qeybaha Podcast-ka qaarkood ee aan weydiinnay isticmaaleyaasha waxaa ku kala aragti duwan fikradaha ku saabsan. Isticmaalayaasha qaar waxay doorbidaan silikoon si ay uqabsadaan sifiican iyo, waxaas oo dhan, dahaarka acoustic, kuwa kale ma jecla Dhinaca kale, waa wax xiiso leh in la arko in xantaasi ay dhigeyso AirPods 3 ka baxsan ka noqoshada buuqa, wax shaki la'aan ah inuu dheellitirka dheelitirka u leeyahay ikhtiyaarka ah inaan lagu darin silikoon qaybta ugu dambeysa. Bixinta maqaalkani wuxuu muujinayaa naqshad ka sii fidsan Pro, xoogaa ergonomic guud ahaan ah.
Waa inaad sii sugtaa si aad u aragto waxa ugu dambeeya ee ku dhaca, laakiin wax waliba waxay muujinayaan inay la mid noqon doonaan bixintan. Waan arki doonaa waxa dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Bixin cusub oo ah AirPods 3 oo u eg AirPods Pro
Apple waxay soo jiidan kartaa Foxconn iyo Magna si ay u sameyso gaarigeeda Apple
HomePod waxaa laga iibiyay Mareykanka